🐅 ရမ္မပူရန်က လူသားစားကျား - Richard Myo Thant
December 1, 2021 December 1, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on 🐅 ရမ္မပူရန်က လူသားစားကျား
ဂျေကန်နဲ့သူ့မိန်းမအမီနာတို့ဟာတနေ့နေ့လည်ခင်းမှာကော်ဖီစိုက်ခင်းတစ်ခုဘေးကနေဖြတ်လျှောက်လာနေတယ်။ ဂျေကန်ဟာ Sholaga ‘ရှိုလာဂ’လို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယတောင်ပေါ်သားတိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယသားတို့ဓလေ့အတိုင်းဂျေကန်ကရှေ့ကလျှောက်ပြီး သူ့မိန်းမအမီနာကနောက်ကနေ ကော်ဖီစေ့ထုပ်ကြီးခေါင်းပေါ်ရွက်ကာ နောက်ကနေခြေတစ်လှမ်းခွာပြီးလိုက်လာတာဖြစ်တယ်။ ဂျေကန်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာ ပုဏ္ဏကြီးတောင်ကြောဒေသက ကော်ဖီစိုက်ခင်းလုပ်သားတွေဖြစ်တယ်။ အမီနာဟာအသက် ၁၈ နှစ်ပဲရှိသေးပြီး ဂျေကန်ကသူ့မိန်းမကို မျက်စိအောက်ကအပျောက်မခံအောင်ချစ်တယ်။
အခုလည်းအတူတူသွားရင်း ရေခမ်းနေတဲ့စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုကိုဖြတ်လျှောက်ကာ တဖက်ကမ်းစောင်းကိုဂျေကန်ကရှေ့ကနေတက်သွားတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ကမ်းစောင်းတစ်လျှောက်ပေါက်နေတဲ့ မြက်ပင်လိုကြံပင်အစုတစ်ခုထဲကနေ ကျားကြီးတစ်ကောင်ဟာဝုန်းကနဲခုန်ထွက်လာပြီး ဂျေကန့်မိန်းမလေးပေါ်ကိုခုန်အုပ်လိုက်ပါလေရော။
မထင်မှတ်ပဲလန့်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ ဂျေကန်ဟာ သူ့မိန်းမလေးကိုအကြောက်လွန်ပြီး ကယ်ပါလို့ပြောနေတဲ့အကြည့်နဲ့ မြေကြီးပေါ်မှာတစ်စောင်းလဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျားကအမီနာရဲ့နောက်မှာဝပ်လျှက်သားရှိနေပြီး လက်နှစ်ဖက်ကအမီနာရဲ့ပခုံးပေါ်အုပ်လျှက် အစွယ်တကားကားပါးစပ်ကြီးဖွင့်လျှက်သားအမီနာရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။
ရုတ်တရက်အံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီး ဂျေပန်ဟာကျောက်ရုပ်လိုတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ပဲကြက်သေသေသွားတယ်။ ကျားကြီးဟာဗယ်ဘက်မျက်လုံးတစ်ဖက်လပ်နေပြီး ဗယ်ဘက်နားရွက်လည်းပြတ်နေကာ ခေါင်းမှာလည်းဒဏ်ရာအစင်းကြောင်းကြီးနဲ့အလွန်ရုပ်ဆိုးကာ အကျည်းတန်လှတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျားကြီးဟာ မြေကြီးတုန်သွားအောင် ကြောက်မျက်ဖွယ်တစ်ချက်ဟိန်းလိုက်ပြီး အမီနာကိုညာဘက်ပခုံးကကိုက်ချီကာ ရေမရှိတဲ့စမ်းချောင်းထဲဖြတ်လျှောက်သွားပါတော့တယ်။ အမီနာလေးဟာကျားပါးစပ်ထဲမှာ ခေါင်းအောက်စိုက်အနေအထားနဲ့ ဗယ်ဘက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ဆံစတွေဟာ မြေမှာတရုတ်တိုက်ရင်း ကျားပါးစပ်ထဲပါသွားရှာတယ်။
ခဏအကြာမှာတော့ ကျားကြီးဟာ သူ့ရဲ့သားကောင်ကိုချီပြီးခပ်လှမ်းလှမ်းကတောအုပ်ထဲကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ အမီနာလေးဟာ ရုတ်တရက်ကျားခုန်အုပ်လို့ မြေကြီးပေါ်ပစ်လဲကတည်းက ကျားချီသွားတဲ့အထိဘာသံမှထွက်မသွားရှာဘူး။ ရုတ်တရက်အံ့ဩသတိမေ့သွားတာလား ရုပ်ဆိုးလွန်းလှတဲ့ကျားအဆွဲခံရချိန်မှာအကြောက်လွန်ပြီးတစ်ခါတည်းအသက်ထွက်သွားသလားမသိရပါ။ ဒါဟာဂျေကန်အနေနဲ့ သူ့မိန်းမလေးကို နောက်ဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရခြင်းပါပဲ။
ရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း၊ ရုပ်ဆိုးလှတဲ့ကျားရဲ့သွင်ပြင်နဲ့ အနားကပ်ပြီးအကျယ်ကြီးဟိန်းလိုက်တဲ့အသံကြောင့် ဂျေကန်ဟာမြေစိုက်ကျောက်ရုပ်လို တုပ်တုပ်မှမလှုပ်ပဲ အံ့ဩတုန်လှုပ်နေမိတယ်။ အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ရမ္မပူရန်လူသားစားကျားပေါ်ပေါက်လာကာ လူကိုကိုက်သတ်ချီယူသွားတဲ့ ပထမဦးဆုံးဖြစ်စဉ်ပဲ။
နောက်တစ်လလောက်အကြာမှာ နွားကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ဟာ ရမ္မပူရန်ကနှစ်မိုင်အကွာမှာကျားဆွဲခံရပြန်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်မှာတော့ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ကျားစားတဲ့အလောင်းကို ခြံတစ်ခုထဲကနေပြန်ရပါတယ်။ နောက်သုံးပတ်အကြာမှာပဲ တတိယအကြိမ်လူကို ကျားဆွဲတဲ့အဖြစ်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ လူသားစားကျားဟာ ဘာလို့လူကိုတစ်လလောက်စီခွာပြီးဆွဲသလဲ? ဆက်တိုက်လူလိုက်ရှာပြီးမဆွဲဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။
လူသားစားကျားဟာ ပေါရိသာရလို နေ့တိုင်းလူသားစားရမှတင်းတိမ်ကျေနပ်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါ။ မှန်ကြည့်ပြီးဒီတစ်ပတ်တော့ လူသားကီတိုဒိုင်းယတ် keto diet meat plan စားထားတယ် ငါးပေါင်လောက်ဝိတ်ကျအောင် တစ်လလောက်ဘာမှမစားပဲနေမယ်လည်းမလုပ်ပါ။ သဘာဝအတိုင်းရိုးရိုးတောကောင်ကိုရှာစားနေရာက လူကိုပြောင်းပြီးကိုက်သတ်စားတဲ့အမူအကျင့်ပြောင်းစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိ ပါ တယ်။
ပြီးတော့ကျား diet ဒိုင်းယတ်အစားဓလေ့ပြောင်းတယ်ဆိုတာက ချက်ချင်းပြောင်းချင်မှပြောင်းမယ်။ ကြောင်တွေကြွက်ခုပ်နေရာက လစ်ရင်လစ်သလို ကြက်လေးဘဲလေးကိုခိုးအုပ်သလိုမျိုးဖြစ်တာပါပဲ။
အဲဒီတော့အလွယ်တကူလူကိုရရင်လူကိုကျားကသတ်စားမယ်။ လူနဲ့မကြုံတွေ့ရင်တွေ့တဲ့သဘာဝတောကောင်ကိုရှာစားမယ်။ အဲ့ဒီသဘော ပါပဲ။
သိပ်ရဲတင်းလာတဲ့ လူသားစားကျားတွေကတော့ ညကလေးမှောင်တယ်ဆိုတာနဲ့လူနေအိမ်ခြေရှိရာရွာနားချဉ်းကပ်ကာ လူနေတဲအိမ်တွေရဲ့ ထရံကိုဖျက်ဖို့၊ တဲအိမ်တွေရဲ့မလုံ့တလုံတံခါးကိုဖျက်ဝင်ပြီး လူကိုဝင်ဆွဲတာတွေအထိရှိတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို ကြုံရင်ကြုံသလိုထည့်ပြောပြပါမယ်။
အခုတတိယအကြိမ်ကျားဆွဲတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ရရင် ကိုလေဂယ်-လော့ကန်ဟဲလီ-ဘိုင်လူး-ဒင်ဘန်တို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမပေါ်က မိုင်တိုင် ၂၁ အနားလေးမှာဆွဲသွားတာပါ။ ဒီတစ်ခါကျားဆွဲခံရသူက သက်လတ်ပိုင်းလမ်းလုပ်သားမိန်းမတစ်ယောက်ပါ။ နေမဝင်ခင် ညနေ ၅ နာရီလောက်လင်းလင်းချင်းချင်းအချိန်ကြီးမှာကို သူမရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ရှေ့မှာတင်ကျားဆွဲသွားတာပါ။
အလုပ်လုပ်ရင်းတောထိုင်ချင်စိတ်လေးပေါက်လာတယ်ထင်ပါရဲ့။ အလုပ်ရပ်ကာလမ်းဘေးကတောအုပ်ထဲဝင်ပြီးထိုင်လိုက်ချိန်မှာပဲ ကျားကဘယ်ကမှန်းမသိ ဝုန်းပေါ်လာပြီး ဆွဲချသွားတာပါ။ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးသွေးရူးသွေးတန်းအော်တာကို အနားမှာရှိသူတွေကကြားလိုက်ပြီးကျားကြီးချီသွားတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီကျားကြီးဟာ မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းမှာအမာရွတ်ကြီးတွေရှိကာ ဗယ်နားရွက်ပြတ်နေကာ ဗယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်လပ်နေတာကို ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေတွေ့လိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
[ဒီလိုမျိုးကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူက လူသားစားကျားတွေကိုပစ်ခတ်နှိမ်နင်းပေးခဲ့တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တောတိရိစ္ဆာန်တွေကိုချစ်မြတ်နိုးသူ ကဲနက်အန်ဒါစန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာလူသားစားကျားကိုနှိမ်နင်းရာမှာ ကျားမှားမပစ်မိအောင်အင်မတန်ဂရုစိုက်ကာကျားမျိုးမတုန်းရေးပညာပေးတွေကိုရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်တွေဟာ မှတ်တမ်းသဘောပိုဆန်နေတဲ့အတွက် ကျနော့်အနေနဲ့ ကျနော်ဖတ်ဖူးသမျှကျားအကြောင်းဗဟုသုတတွေနဲ့ရောပြီး ကျနော်ရေးတတ်သလို story telling ပုံစံနဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ကိုပြန်ပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အတတ်နိုင်ဆုံးမြေအနေအထားကို Google map နဲ့ပြန်တိုက်ပြီး မလိုအပ်တဲ့မြေအနေအထားအကြောင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြတာကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ဒီအကြောင်းစာအုပ်ထုတ်ရင် မြေပုံလေးထည့်ပေးလိုက်တာက မြေပြင်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြတာထက်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလူသားစားကျားသောင်းကျန်းနေတဲ့ သတင်းကိုသတင်းစာမှာဖတ်ရချိန်မှာပဲဖြစ်ချင်တော့ကျနော့်ရဲ့ အဲ့ဒီရမ္မပူရန်၊ ဘိုင်လူး၊ ဒင်ဘန်၊ မြောက်ကိုအင်ဘက်တောဒေသတကြောအမဲလိုက်ခွင့်လိုင်စင်ကသက်တမ်းကုန်နေပါတယ်။
အဲ့ဒီသတင်းဖတ်ရပြီးချိန်မှာ အလုပ်ကအထူးခွင့်ဆယ်ရက်ယူကာ ကျနော်နေတဲ့ဘန်ဂလိုမြို့ကနေ နောက်နေ့မနက်မှာပဲကျားဆိုးကိုနှိမ်နင်းဖို့ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒီကျားဟာစောစောစီးစီးမနှိမ်နင်းရင် နောင်မှာပါးနပ်စဉ်းလဲပြီးပိုမိုနှိမ်နင်းရခက်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ပြီးအိန္ဒိယထုံးစံအတိုင်း မကောင်းဆိုးဝါးကကျားယောင်ဖန်ဆင်းပြီး သူမကြိုက်သူတွေကိုသတ်စားတယ်လို့ယူဆကာ အပြင်မထွက်ရဲအောင်ကြောက်ရွံနေကြမှာပါ။ အခုပဲတောထဲမသွားရဲ၊ နွားမကျောင်းရဲ၊ ကော်ဖီခြံထဲမဆင်းရဲဖြစ်ကုန်ကြပြီလေ။
ဒီကျားကလည်းအရုပ်ဆိုးကာကြောက်မျက်ဖွယ်မျက်နှာကြီးနဲ့မို့ အယူသီးတဲ့ မဖွံဖြိုးတဲ့ဌာနေဒေသခံတွေထင်လည်းထင်စရာပါပဲ။
ဘန်ဂလိုမြို့ကနေ မနက်စောစောထွက်လာပြီး ၈၇ မိုင်အကွာ ကိုလေဂယ်ရှိသစ်တောရုံးကိုရောက်တော့ ရုံးတောင်မဖွင့်သေးပါဘူး။
ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါ။ ဒီကျားဟာ မိုင် (၆၀) ပတ်လည်ရှိတဲ့ ဒိစတြိတ်တစ်ဝက်စာလောက်ဧရိယာအတွင်းမှာ သုံးလလောက်ကြီးစိုးနေတာပါ။
ဒီကျားသောင်းကျန်းတဲ့ဧရိယာ ၃၆၀၀ စကွဲမိုင်အတွင်းမှာ သူဟာဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နဲ့ Scarlet Pimpernel ဝတ္ထုထဲကလို အားလုံးကရှာနေတာကို ဘယ်သူမှမတွေ့ရပါဘူး။ နောက်ဆုံးမတော့လည်း သုံလလောက်အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာပဲ မထင်မှတ်ပဲသူ့ကံကြမ္မာနိဂုံးချုပ်သွားတာပါ။
မြောက်ကိုအင်ဘတောဒိစတြိတ်ဟာ တောတွေတောင်တွေနဲ့အများအားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ မျက်စိထဲမှာမြင်အောင် လက်ဝဲရစ်အနေနဲ့ တောင်ဘက်ကစပြောရရင် တောင်ဘက်မှာကိုအင်ဘတောလွင်ပြင်ရှိပြီး အပေါ်ကိုမြေပြင်ကမတ်တက်သွားကာ ဒင်ဘန်တောင်စောင်းရှိတယ်။
အနောက်တောင်ဘက်မှာ နီးဂီရိတောင်ပြာတန်း Blue Mountain Range ရှိတယ်။အနောက်ဘက်မှာမိုင်ဆိုးတောအုပ်ရှိတယ်။ အနောက်မြောက်ဘက်မှာ ဘီလိဂီရိရန်ဂန်တောင်ကြောရှိတယ်။
မြောက်ဘက်နဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာ ကောဗရီမြစ်ကြီးကတောအုပ်ထူထူတွေအကြားဖြတ်စီးသွားတယ်။ အရှေ့ဘက်မှာ စလင်းဒိစကြိတ်ကတောအုပ်တွေရှိတယ်။
အဲ့ဒီတော့ ပုဏ္ဏကြီးတောင်ကျောရဲ့အောက်နားက ရမ္မပူရရွာလေးဟာ အခုပြောတဲ့မြေပုံရဲ့အလယ်လောက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရမ္မပူရန်ကျားက အရှေ့ဘက်ရှိကောဗရီမြစ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းပုဏ္ဏကြီးတောင်ကျောကနေ ရမ္မပူရရွာဘက်ကိုဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလေဂယ်မြို့ကနေ အရှေ့တောင်ဘက် ၂၅ မိုင်လောက်ဆင်းချသွားရင်ရမ္မပူရရွာကိုရောက်ပြီ။ သူ့အောက်မှာရမ္မပူရန်တောအုပ်ရှိတာပါ။
တတိယလူကိုကျားဆွဲသွားတဲ့ ကိုလေဂယ်-လော့ကန်ဟဲလီ-ဘိုင်လူး-ဒင်ဘန်တို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှာ ကြိုကြားကြိုကြားလော်လီကားတွေသွားတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်နေ့စဉ်ပြေးဆွဲတဲ့ ဘတ်စ်ကားလည်းရှိတယ်။
ပြဿနာက ရမ္မပူရန်ဘက်သွားတဲ့လမ်းက အိမ်စီးကားနဲ့သွားလို့မသင့်တော်ဘူး။ လမ်းကတောင်တက်မတ်သလို တောင်ဆင်းမှာကျောက်တုံးကြီးတွေပေါတယ်။ တောထူထူကိုဖြတ်သွားတဲ့ နွားလှည်းဘီးရာလမ်းကကျဉ်းပြီး သဲနဲ့ကျောက်တုံးထူတဲ့စမ်းချောင်းတစ်ခုကလည်းဟိုကဒီကဖြတ်စီးနေသေးတယ်။ တောင်ကြားထဲကလမ်းမှာဝါးရုံတွေဖောခြင်းသောခြင်းထူထပ်ပြီး ဝါးပင်တွေကလမ်းပေါ်ဖြတ်ပြီးလဲကျနေသေးတယ်။ ဆင်တွေဆွဲစားသွားလို့ ဝါးပင်တွေ၊ သစ်ပင်သစ်ကိုင်းတွေလမ်းပေါ်ဖြတ်ပြီးလဲကျနေရင် ကားမောင်းသူကကားရပ်ပြီးပုဆိန်နဲ့ရှင်းပြီးမှဆက်သွားလို့ရတယ်။
အပေါ်ကမြေမျက်နှာပြင်အနေအထားကိုရှင်းပြနေရတာက တောတောင်ဘယ်လောက်ထူထပ်သလဲဆိုတာ မြေပြင်အနေအထားကိုသိဖို့ရယ်၊ လမ်းတကြောမှာဆင်တွေ၊ ပြောင်စတဲ့တောကောင်တွေ တွေ့ရတတ်ကြောင်းပြောချင်လို့ရယ်၊ နောင်ပြောပြမယ့်အကြောင်းတွေထဲမှာပါလာမယ့်မြေနေရာအနေအထားကိုသိထားရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုဝါးရုံတွေအောက်ခြေအပင်တွေရှုပ်တဲ့တောအုပ်မျိုးကို ကျားဆိုတဲ့အကောင်မျိုးကပုံမှန်ကကြိုက်လေ့မရှိဘူး။ ပြောင်တို့ဆင်တို့လို မျှစ်နဲ့သစ်ရွက်စိမ်းကြိုက်တဲ့အကောင်တွေပဲပျော်မွေ့ကြတာပါ။
ဒီလိုအောက်ခြေရှုပ်တဲ့တောကို ကျားမကြိုက်ဘူးဆိုတာကအကြောင်းရှိပါတယ်။အောက်ခြေချုံထူပြီးတိုးရခက်ရင်ကျားဟာသူ့သားကောင်ကို ချုံတိုးပြီးချဉ်းကပ်ရခက်ခဲပါတယ်။ ကျားဆိုတဲ့အကောင်မျိုးက ကြောင်တွေလိုပဲ သားကောင်ကိုအသံမကြားအောင်တိတ်တိတ်ကလေးမြေကြီးမှာဝပ်ပြီးတတ်နိုင်သမျှချဉ်းကပ်ကာ နောက်ဆုံးမိနစ်ကျမှအနီးကပ်ထပြီးခုန်အုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ကျားရဲ့အဓိကသားကောင်တွေဖြစ်တဲ့ သမင်၊ ဒရယ်၊ တောဝက်နဲ့ အိမ်မွေးနွားတွေဟာ အောက်ခြေရှုပ်တဲ့တောမျိုးကို သိပ်မဝင်ချင်ဘူး။ နောက်တစ်ခုက အောက်ခြေချုံထူထပ်ပြီးတိုးရခက်တဲ့နေရာတွေမှာ သွေးစုပ်တဲ့ကျွတ်တွေ၊ မှတ်တွေ၊ horse-fly လိုပိုးကောင်တွေခိုအောင်းနေလေ့ရှိပါတယ်။ ကျားကအဲ့ဒီအကောင်ပလောင်တွေကိုအင်မတန်မုန်းပါတယ်။ ဒီနေရာမှာကျားသစ်နဲ့ကျားကအကြိုက်ခြင်းမတူကွဲပြားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပေပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့ပုဏ္ဏကြီးတောင်ကျောတလျှောက်မှာက ရှိုလာဂဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တပိုင်တနိုင်ကော်ဖီခြံတွေ ဟိုတစ်ကွက်ဒီတစ်ကွက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရှိုလဂဆိုတာ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းတမီလ်နာဒူးပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု(၃၆) မျိုးထဲကတစ်မျိုးပါ။
ရှိုလဂတို့ ကုရမ်ဘတို့ဆိုတာ တောထဲကဆေးဖက်ဝင်သစ်ဥသစ်ဖုနဲ့ ပျားရည်စတာတို့ကိုရှာဖွေရောင်းချစားသောက်တတ်တဲ့ တောကျွမ်းတဲ့ချစ်စရာအဘိုးရီးဂျင်းမျိုးနွယ်တိုင်းရင်းသားတွေပါ။
ဖြစ်ပုံကတော့ဒီကျားဟာအစက ကော်ဖီခြံလုပ်သားတွေရဲ့ ကျွဲနွားတွေကိုအလစ်ဆွဲတတ်တဲ့ကျားပါ။ အဲ့ဒီတုန်းကအခုလိုပုံပျက်ပန်းပျက်ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးမဟုတ်သေးဘူးတဲ့။
အဲ့လိုနဲ့သူကအလစ်ဆွဲနေရင်း တနေ့တော့ ကော်ဖီခြံပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဟာ တောင်ဘက်က ကိုအင်ဘတောစီးတီးမြို့ကိုဆင်းပြီး အလွန်ကြီးတဲ့သံညှပ် gin-trap ထောင်ချောက်ကြီးဝယ်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီသံညှပ်ကြီးက စက်ဝိုင်းခြမ်းပုံအသွားတွေနဲ့ jaw သံညှပ်နှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ချလိုက်ရင်နှစ်ပေခွဲနီးပါးကျယ်ပါတယ်။ အလယ်မှာတော့ သွားထိလိုက်တာနဲ့ jaw နှစ်ဖက်ကိုဝုန်းကနဲ့ လျင်မြန်စွာပိတ်ချလိုက်မယ့် မောင်းခလုတ်ပါတယ်။
ဗဟုသုတအဖြစ်ပြောပြရရင် gin-trap တွေကိုအရင်ကိုလိုနီခေတ်က အမေရိကတိုက်မှာဝက်ဝံဖမ်းဖို့၊ အာဖရိကမှာခြင်္သေ့ထောင်ဖို့၊ အိန္ဒိယနဲ့အာရှတလွှားမှာ ကျားထောင်ဖမ်းဖို့၊ ဥရောပမှာဝံပုလွေတို့ကိုထောင်ဖမ်းဖို့ သုံးခဲ့ကြပါတယ်။
gin-trap မှာဘာစပရင်မှမလိုပဲ ကျနော်တို့မီးသွေးညှပ်တဲ့မီးညှပ်ကမောင်တံသဘောကိုသုံးထားတာပါ။ သို့သော်သံပြားကိုကွေးထားတဲ့အတွက်အားပြင်းပြီး သံညှပ် jaw ထဲမိရင်အသွားနှစ်ဖက်စိကရုန်းထွက်ရခက်ပါတယ်။
လည်ချောင်းသွေးပဲစုပ်သွားပြီး တစ်ကိုက်တောင်ကိုက်မစားရသေးဘူး။ သွေးစုပ်လို့ဝတော့ သစ်ရွက်ခြောက်တွေနဲ့ဖုံးထားခဲ့တာက လင်းတတွေလာမမြင်အောင်ဖွက်ထားခဲ့တာ။
နွားပိုင်ရှင်နဲ့အဖွဲ့က ကျားဆွဲသွားတဲ့စွပ်ကြောင်းအတိုင်းသတိတကြီးနဲ့လိုက်ပြီးရှာတော့ နွားမကိုသစ်ရွက်ခြောက်ပုံကြီးအောက်မှာတွေ့ပါလေရော။
အဲ့ဒီမှာနွားမရဲ့ပေါင်နားမှာသံညှပ်ကြီးကို အသေအချာသေသေသပ်သပ်ထောင်ထားကာ သစ်ရွက်ခြောက်တွေနဲ့ အသာလေးဖုံးထားခဲ့ပါလေရော။ နွားပေါင်နားမှာထောင်တာက ကျားတွေကျားသစ်တွေဟာ လူလိုပဲပေါင်သားကြိုက်တတ်တော့ စစားရင်ပေါင်ကနေအရင်ကိုက်တတ်လို့ပဲ။ ကြက်ပေါင်ကိုက်နေကျလူတွေဆိုရင်ပိုသိမယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ကျားကလည်းကံဆျုးတဲ့အပြင်ဒေသခံတွေပါကံဆိုးချင်တော့ ကျားရဲ့လက်ကသံညှပ်ထဲမမိပဲ နွားပေါင်ကိုသွားငမ်းတဲ့ကျားခေါင်းကြီးကသံညှပ်ထဲမိလျက်သားဖြစ်သွားပါလေရောဗျာ။
KFC ကြိုက်တဲ့ကျားဖြစ်ပုံရပါတယ်။ မစားခင်သွားနမ်းကြည့်ပုံပါပဲ။ အချို့လူတွေလည်းအဲ့လို အစာကိုနမ်းကြည့်ပြီးမှစားတတ်ပါတယ်။
သံညှပ်ကကျားရဲ့နားရွယ်နောက်ကနေလည်ပင်းတဝိုက်ညှပ်ပိတ်လျက်သားကြီးဖြစ်နေကျားကရုန်းတာ ဘာပြောကောင်းမလဲ အုန်းအုန်းထနေတာပေါ့။
သံညှပ်ကိုသံကြိုးနဲ့တွဲပြီးမြေပြင်မှာငုတ်နဲ့ရိုက်ထားတာ ကျားကဘယ်လောက်ရုန်းသလဲဆိုရင် ငုတ်ပါမြေပြင်ကကျွတ်ပြီးကျားနောက်ပါသွားပါလေရော။
အဲ့လိုတရွတ်တိုက်ခေါင်းမှာသံညှပ်ကြီးညှပ်လျက်သားသွားလိုက်တာ နှစ်မိုင်လောက်လည်းရောက်ရော ကျောက်တုံးကြီးနှစ်တုံးကြားမှာသံညှပ်ကြီးကတစ်ပြီးသွားညှပ်နေပါလေရော။
အဲ့ဒီမှာကျားကသံညှပ်ကနေရုန်းထွက်လို့မရပဲ ရုန်းလေညှပ်လေပိုနာလေနဲ့နာလွန်းလို့ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဟိန်းတာဟိန်းတာဆိုတာ နှစ်မိုင်အကွာကကော်ဖီခြံလုပ်သားတွေဟာ ကြောက်လို့ညတစ်ပိုင်းလုံးအိပ်မရဘူး။
နောက်ဆုံးမတော့ကျားကကျောက်တုံးနှစ်တုံးကြားကလည်းလွတ် သံညှပ်ကြီးလည်းပြုတ်ထွက်ကာ ခေါင်းမှာဒဏ်ရာတွေဗရပွနဲ့ နားရွက်တစ်ဖက်၊ မျက်လုံးတစ်လုံးသံညှပ်ကအရုန်းမှာဆုံးခဲ့ပါလေတော့တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ရမ္မပူရန်လူသားစားကျားဟာ ဒီလောက်အရုပ်ဆိုးပြီးကြောက်စရာရုပ်ကြီးဖြစ်နေတာပါ။
ကျားကသံညှပ်ကလွတ်မြောက်အပြီးမှာ နေ့နေ့ညညညည်းတွားနေတာကို တောင်ကျောတစ်လျှောက်တစ်ပတ်လောက်ကြားရပါတယ်။
အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်အပြီးမှာ ဘာသံမှကျားဆီကထပ်မကြားရတော့ပဲ အချိန်တစ်ခုအကြာငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ အားလုံးကကျားကြီးဟာခေါင်းနဲ့လည်ပင်းကဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးသွားပြီလို့ထင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။
ကော်ဖီခြံပိုင်ရှင်နဲ့လုပ်သားတွေဟာ လင်းတတွေပျံနေတာကိုအသေအချာလိုက်ရှာကြည့်ကြပါတယ်။ သဘောကကျားသေရှိမယ့်နေရာကိုသိလျင်လို့ပါ။
လင်းတဆိုတဲ့အမျိုးကအသေကောင်ရှိရာကို အဝေးကြီးကနေမြင်တတ်သိတတ်တဲ့အကောင်မျိုးတွေပါ။ အဲ့ဒီတုန်းကကမ္ဘာမှာလင်းတတွေလည်းပေါခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာလင်းတတွေပျံဝဲနေတာသာတွေ့ရပြီး ဘယ်တစ်ကောင်တစ်မြီးမှမြေပြင်ကိုထိုးဆင်းတာမတွေ့ရတဲ့အတွက် ဒီကျား “မသေတာကို” ပြနေပါတယ်။
အဲ့ဒီကနေ လေးညလွန်မြောက်အပြီးတနေ့လည်ခင်းမှာ ကျနော်စစခြင်းမှာပြောခဲ့သလို ဂျေကန်နဲ့အမီနာတို့ရေခမ်းနေတဲ့စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုကိုဖြတ်အလျှောက်မှာမထင်မှတ်ပဲအမီနာကိုကျားဆွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
သံညှပ်ထောင်ချောက်မိအပြီးမှာ သူ့ကိုထောင်ဖမ်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုနာကြည်းမုန်းတီးသွားတာလား ဘာကြောင့်မှန်းမသိပဲ လူသားစားကျားအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေက အစောပိုင်းမှာပြောခဲ့သလို ကျနော်ကိုလေဂယ်မြို့သစ်တောရုံးကနေကြားသိခဲ့ရတဲ့သတင်းအချို့နဲ့နောက်တော့ဒေသခံတွေကိုမေးပြီးသိခဲ့ရသမျှဒီလူသားစားကျားရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလေဂယ်ကစထွက်တာနဲ့ ရမ္မပူရရွာကိုအရင်မောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ရမ္မပူရန်တောစပ်ကဘိုတဲမှာကျနော်စခန်းချဖို့ ကျနော့်ရဲ့စတူဘေကာကားလေးကိုအထက်မှာပြောခဲ့ဖူးတဲ့ အလွန်ကြမ်းတဲ့ ၂၅ မိုင်ခရီးကိုဖြတ်မောင်းခဲ့ရပါတယ်။
ကျားကပုဏ္ဏကြီးတောင်တန်းမှာပထမစလူကိုဆွဲပြီးဘိုင်လူးဘက်ကိုဆင်းသွားကြောင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုင်လူဟာ မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်းဆွဲရင် မိုင် (၆၀) လောက်ဝေးပါတယ်။
သစ်တောရုံးရှိတဲ့ကိုလေဂယ်မြို့ဘက်ကသွားရင် ကျနော်အထက်မှာပြောဖူးတဲ့ ကိုလေဂယ်-လော့ကန်ဟဲလီ-ဘိုင်လူ-ဒင်ဘန်လမ်းမအတိုင်းသွားရင် ဘိုင်လူးရွာလေးကိုမိုင် ၃၀ လောက်ဆင်းရင်ရောက်ပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ကျားသတင်းကိုအသေအချာသိရဖို့ ကိုလေဂယ်မြို့ကိုလမ်းကြမ်းကြမ်းပြန်မောင်းပြီး ဘိုင်လူးဘက်ကို မိုင် ၃၀ ပြန်ဆင်းရမလား? အခုရောက်နေတဲ့ရမ္မပူရန်ဘိုတဲကနေ ဘိုင်လာကို သစ်တောကြိုးဝိုင်းကို ၁၉ မိုင်ဖြတ်လျှောက်ရမလားဆိုတာ ရွေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။
အကယ်လို့ ဒုတိယလမ်းကိုအတိုင်းသွားရင် သစ်တောကြိုးဝိုင်းအနားသတ်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ ရွာသိမ်ရွာငယ်လေးတွေကနေ ကျားသတင်းကိုပိုတိတိကျရနိုင်မယ်လို့ယူဆပြီး အဲ့ဒီလမ်းကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။
အနောက်တောင်ဘက်ကိုလူသွားလမ်းအတိုင်းလျှောက်လာရာမှာ သစ်တောကြိုးဝိုင်းတောင်ဘက်အတိုင်းမိုင်အနည်းငယ်ဆင်းသွားတဲ့ခပ်နိမ့်နိမ့်တောင်လေးတွေပတ်လည်မှာ ဟိုတစ်ကွက်ဒီတစ်ကွက်စိုက်ခင်းတွေနဲ့ ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေတောထနေတာကို အပြန်အလှန်တွေ့ရပါတယ်။
တဲစုစုရွာလေးအချို့ကိုဖြတ်သန်းခဲ့အပြီးမှာ ရွာသားတွေဟာတဲတံခါးပိတ်ပြီးနေတာသော်လည်းကောင်း၊ အပြင်မထွက်ပဲ တဲဝမှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေတာကိုသော်လည်းကောင်းတွေ့ရပါတယ်။
လူသားစားကျားသောင်းကျန်းနေကြောင်းသတင်းကအတော်ပြန့်နှံ့နေပြီးအခုလိုမသွားရဲမလာရဲ အပြင်မထွက်ရဲအောင် ကြောက်ရွံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတဲစုလေးတွေမှာရှိတဲ့ ဒေသခံရှိုလေဂတွေအားလုံးနီးပါးပြောတာက ကျားဟိန်းသံကိုမနေ့ညကဖြစ်ဖြစ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၇၂ နာရီအတွင်းအနီးတဝိုက်မှာကြားရပါတယ်တဲ့။
တစ်နေရာမှာဆိုရင် စိုက်ခင်းရှင်တစ်ယောက်က မကြာခင်ကမှထွန်တုံးချထားတဲ့သူ့လယ်ကွယ်ကိုဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ ကျားခြေရာကြီးတွေကိုပြပါတယ်။
🐾 ကျနော်ဟာကျားခြေရာအတိုင်းအထွာကိုနောင်အသုံးဝင်အောင်အသေအချာမှတ်ယူပြီးမှ ခရီးဆက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်မကြာခင်မှာတွေ့လာတာက အဲ့ဒီဒေသခံတွေဟာ အကြောက်လွန်ပြီးယောင်တောင်တောင်ပြောတာလား တွေ့ရာဖွတာလားမသိပါ။
ကျနော်ဖြတ်လျှောက်လာတဲ့ ရမ္မပူရန်ကနေဘိုင်လူးအထိ ၁၉ မိုင်တလျှောက် ကျားတွေပုံမှန်မဟုတ်ပဲများလွန်းသလိုလိုဖြစ်နေပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လမ်းတလျှောက်ရွာတိုင်းလိုလိုက ကျားဟာပြီးခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက်အတွင်းရွားနားကပ်လာတယ်လို့ပြောကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။
နေမဝင်ခင် ညနေ ၅ နာရီလောက်မှာပဲ အိမ်ခြေ ၂၀ လောက်ရှိတဲ့ ဘိုင်လူးရွာလေးကိုကျနော်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ သူတို့အဖော်ကို ၂၁ မိုင်တိုင်နားမှာ ကျားဆွဲသွားတာကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်တဲ့ လမ်းလုပ်သားအုပ်စုနဲ့တွေ့ပါတယ်။
ပြန်ပြောပြနိုင်ဆိုသူတို့ကကြောက်လန့်ပြီးတုတ်တုတ်မျှမလှုပ်နိုင်ခင်မှာ သူတို့ရှေ့မှာတင် ကျားပါးစပ်ထဲမှာလမ်းအလုပ်သမကကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်ရင်း ကျားကတောစပ်ကချုံတွေထဲတိုးဝင်သွားတာကို ညနေ ၅ နာရီအလင်းရောင်အောက်မှာတွေ့လိုက်ရတာကိုး။
အနီးဆုံးသစ်တောဘိုတဲက ကားလမ်းအတိုင်း ဒင်ဘန်ဘက်ကို နောက်ထပ်သုံးမိုင်ခွဲအကွာလောက်မှာရှိပါတယ်။ လမ်းတဖက်တချက်မှာသစ်တောကြိုးဝိုင်းရှိနေပါတယ်။
လမ်းလုပ်သားတွေပြန်ပြောပြတာကိုနားထောင်အပြီးမှာ ညနေ ၅ နာရီခွဲနေပြီမို့ မကြာခင်မှောင်တော့မှာကိုကျနော်သိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ခပ်သုတ်သုတ်လေးလှမ်းလိုက်တာ မမှောင်ခင်မှာပဲ သစ်တောဘိုတဲဆီကိုရောက်သွားပါတယ်။
ကျနော်အစောပိုင်းကမြေပုံပြောပြပြီးရှင်းပြခဲ့သလို အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ ဘီလိဂီရိရန်ဂန်တောင်တန်းနောက်ကို နေလုံးကြီးကဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရန်းပြုတ်နေတဲ့ကုလားထိုင်အိုကြီးကို ဘိုတဲဝရံတာဆီကိုဆွဲယူပြီးထိုင်လိုက်ချိန်မှာပဲ နေဝင်ရီတရောဥဒေါင်းတစ်ကောင်ရဲ့တွန်သံနဲ့ တောကြက်တစ်ကောင်ရဲ့အိပ်တန်းတက်တွန်သံက ကျနော့်ကိုဆီးကြိုနေပါတယ်။
အနောက်ဘက်ရှိတောင်တန်းဆီက ဆင်းလာရင် ခပ်ဝေးဝေးကနေအော်မြည်လိုက်တဲ့ဆတ်ငယ်တစ်ကောင်ရဲ့အော်သံဟာ တောင်ခြေတကြောကသစ်တောထဲဖြတ်ပြီးစီးဝင်သွားသံဟာ ကျနော့်နားထဲမှာတော့ တောတောင်ရေမြေသဘာဝတရားရဲ့ ဂီတသံစဉ်တစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီတောင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ များပြားလှတဲ့သစ်ပင်သစ်တောရဲ့ထိပ်ဖျားတွေဟာ နက်မှောင်လာတဲ့ညဦးအလင်းရောင်ထဲမှာ ကောဇောအစိမ်းရင့်ရောင်ကြီးလိုဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်ထပ်နာရီဝက်မရှိတရှိလောက်အကြာ လုံးဝအမှောင်အတိမကျသွားခင်လေးမှာပဲ အချိန်မှန်ထွက်နေကျ သန်းနဲ့ချီတဲ့ပိုးစုန်းကြူးလေးတွေဟာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နဲ့ပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်။
သစ်ပင်စောင့်နတ်သေးသေးလေးတွေ မီးအိမ်ကိုင်ကာ တနေရာနဲ့တနေရာလေထဲမှာလွင့်မျောနေသလိုပဲ အဲ့ဒီပိုးစုန်းကြူးလေးတွေဟာ သစ်ပင်ထိပ်ဖျားတွေ ချုံတွေကြားမှာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်စီးမျောနေကြပါတယ်။
ရှားရှားပါးပါးအချိန်မျိုးမှာ သူတို့ဟာတစ်ချိန်တည်းတပြိုင်တည်း ညီတူညာတူလင်းချလိုက်တာ အဲ့ဒီသူတို့ထောင်နဲ့ချီပြီးစုဝေးနေတဲ့ သစ်ပင်နဲ့ချုံနားတဝိုက်ဟာခေတ္တခဏလေး အမှောင်ပျောက်ကာ မီးစုန်းရောင်တောက်ပြီးမီးထွန်းလိုက်သလိုလင်းလက်သွားပါတယ်။
တောတောင်ဒေသညချမ်းရဲ့ သဘာဝအေးချမ်းမှုရှုခင်းကိုခံစားအပြီးမှာ ကျနော်ဟာခပ်စောစောအိပ်ရာဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘိုတဲရဲ့အလယ်ကအခန်းလေးထဲမှာအိပ်နေရင်း မနက်အစောကြီး ၂ နာရီလောက်မှာကျနော် ကျားဟိန်းသံကြားပြီးလန့်နိုးလာပါတယ်။
ဒါဟာကျားရဲ့မနက်ပိုင်းမြည်ဟည်းသံ morning call ဖြစ်ပြီးပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမြည်ဟည်းရင်း တောင်ကြားတစ်လျှောက်အသံကဝေးပြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။
မနက်အစောကြီးမှာပဲကျနော်ဟာ ဘိုင်လူးရွာကိုရောက်ပြီး သားကောင်ခြေရာကောက်မယ့် shikari တောတွင်းခြေရာကောက်ကူဖော်လောင်ဖက်နှစ်ယောက်ရယ်၊နွားမတမ်းသုံးကောင်ရယ်ဝယ်လို့ပြီးနေပါပြီ။
အိန္ဒိယမှာ ကျားထောင်ဖမ်းဖို့နွားဝယ်ရတာ အင်မတန်ခက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမို့စောစောစီးစီးအဆင်ပြေသွားတာကျေနပ်စရာပါ။
အဲ့ဒီအထဲကပထမနွားကို မနက်စောစောကျားဟိန်းသံကျနော်ကြားတဲ့ ဘန်ဂလိုရဲ့အနောက်ဖက်မျက်နှာမူရာမှာရှိတဲ့ တောင်ကြားထဲက စမ်းချောင်ဘေးမှာချည်ပါတယ်။
ဒုတိယနွားကို ကားလမ်းဘေးကကိုက်တစ်ရာလောက်အကွာမှာရှိတဲ့ သစ်တောထဲကမြေကွက်လပ်မှာချည်နှောင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာက ရွာနဲ့သစ်တောဘိုတဲအလယ်လောက်မှာရှိတာပါ။
တတိယနွားကိုတော့ ကားလမ်းမိုင်တိုင် ၂၁ ဆီဆွဲယူသွားပြီး လမ်းအလုပ်သမကိုကျားဆွဲသွားတဲ့နေရာနားမှာ ချည်ပါတယ်။
ချောင်းဘေးနှစ်ဖက်တစ်လျှောက်မှာဝါးပင်တွေပေါက်နေကာတစ်နေရာမှာကွက်ပြီးမြေကွက်လပ်ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီနေရာဟာ သစ်တောဌာနရဲ့ ပျိုးပင်မျိုးစုံကိုစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးတဲ့စိုက်ခင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ပြောတာအမှန်ပဲဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ ကျားခြေရာအဟောင်းတွေရော ပိုလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ခြေရာအသစ်တွေရောကို သုံးနေရာလောက်မှာတွေ့ရပါတယ်။
ကျနော်ကအခုတွေ့ရတဲ့ကျားခြေရာတွေကိုကျနော်ပထမနေ့က ရွာတဲစုနားမှာတွေ့ရတဲ့ ခြေရာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရာမှာ နှစ်ခုစလုံးက ကျားထီးခြေရာတွေမှန်းသိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုသစ်တောဌာနစိုက်ခင်းမှာတွေ့ရတဲ့ခြေရာတွေက ပိုအသက်ကြီးပြီးပိုအကောင်ကြီးတဲ့ကျားရဲ့ခြေရာတွေဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ တတိယနွားကိုအဲ့ဒီသစ်တောစိုက်ခင်းနားစမ်းချောင်းဘေးကမြေလွတ်နေရာလေးမှာ ချည်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိစ္စဝိစ္စတွေပြီးတော့ ညနေ ၅ နာရီခွဲဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဟာ ဘိုင်လူးကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အပြန်လမ်းမှာ ခပ်တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရုပ်ရည်နဲ့ ရှိုလေဂလူငယ်တစ်ယောက်ကကျနော့်အနားကိုချဉ်းကပ်လာပါတယ်။
သူအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဏ္ဏကြီးတောင်စောင်းကို ခရီးသွားတစ်စုကဖြတ်လျှောက်သွားချိန်မှာ Sahib (သခင်ကြီး) ဆာဟစ်တစ်ယောက်ရမ္မပူရန်ကို လူသားစားကျားကိုပစ်ဖို့ရောက်နေကြောင်း သူ့ကိုပြောပြသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
(အိန္ဒိယမြောက်ပိုက်းမှာ မျက်နှာဖြူတွေကို Sahib ဆာဟစ်လို့ခေါ်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာdorai သူရိုင်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ မြန်မာလို ကိုလိုနီခေတ်မှာ သခင်လို့ခေါ်ကြတဲ့သဘောပါ။ အာဖရိကမှာဘွာနာလို့ခေါ်ကြတဲ့သဘောအတိုင်းပါပဲ။)
အဲ့ဒါနဲ့သူါဇနီးကိုကိုက်သတ်သွားတဲ့ကျားကိုကလဲ့စားချေချင်စိတ်ပေါ်လာပြီးစိုက်ခင်းရှင်ဆီကနေ ကျားဆိုးနှိမ်နင်းရာမှာကျနော့်ကိုအကူအညီပေးခွင့်ပြုဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သူရမ္မပူရန်ရောက်တော့ ကျနော်ကဘိုင်လူးကိုသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ ဘိုင်လူးကိုချက်ချင်းလိုက်ချလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်စာဂျေကန်ကို ဒီကိစ္စအတွက်ကျနော့်ရဲ့လက်ရုံးအဖြစ်ချက်ချင်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နဲ့ ကျားဆိုးကိုမြေလှန်ရှာပြီးနှိမ်နင်းဖို့ တည်ငြိမ်ပြတ်သားစွာဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုကျနော်သဘောကျပါတယ်။
ကျနော်တို့ဘိုတဲကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ ဂျေကန်နဲ့နောက်လမ်းပြနှစ်ယောက်ကို နက်ဖြန်မနက်စောစော ၂၁ မိုင်ကနွားကိုသွားကြည့်ပြီးကျားကိုက်မကိုက်ကြည့်ဖို့နဲ့အစာရေစာဖြည့်တင်းပေးဖို့မှာကြားပါတယ်။ ကျနော်ကတော့အခြားနွားနှစ်ကောင်ကိုသွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတိုင်းမနက်မှာ အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ ကျနော်မနက်အစောကြီးကျားဟိန်းသံကြားတဲ့တောင်ကြားကစမ်းချောင်းဘေးမှာချည်ထားတဲ့ပထမနွားဆီအရက်သွားပါတယ်။ ပြီးမှသစ်တောဘိုတဲနဲ့ဘိုင်လူးကြားကဒုတိယနွားဆီသွားပါတယ်။
ဂျေကန်နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုလိုင်လူးမှာထားခဲ့ပြီး ဒီဒေသတောကောင်ခြေရာကောက်တော်ကြောင်းသူ့ကိုယ်သူပြောထားတဲ့ ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုခေါ်ကာအနောက်ဘက်ကဘီလိဂီရိရန်ဂန်တောင်ခြေရောက်တဲ့အထိတောအုပ်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
(ဒီနေရာမှာ အစောတုန်းပိုင်းကမြေပြင်အနေအထားကိုဘာလို့အချိန်ကုန်ခံကာရှင်းပြခဲ့သလဲဆိုတာ စာဖတ်သူတို့သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။)
ဒီတောဟာကျနော်မကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာအသစ်ဖြစ်တာကြောင့် လမ်းပြကိုကျနော့်အရှေ့ကလျှောက်ခိုင်းကာ ကျနော်ကလက်မှာရိုက်ဖယ်ကိုအသင့်အနေအထားနဲ့သတိဖြင့်နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ရှိုလာဂတို့ဟာတောနဲ့တသားတည်းလူမျိုးတွေပါ။ သားကောင်တွေဖြတ်လျှောက်တဲ့လမ်းတွေကို မှောင်မည်းတဲ့တောင်ကြားထဲ ကျနော်တို့ရှေ့နောက်လျှောက်ပြီး ခြေရာခံကောက်စဉ်မှာကျနော့်လမ်းပြဟာအနည်းငယ်မှကြောက်ရွံ့ပုံမပြပါဘူး။
မကြာခဏနှစ်ယောက်အတူကိုင်းကျနေတဲ့ဝါးရုံတောတွေ wait-a-bit ဆူးကိုင်းတွေအောက်ကလွတ်အောင်ငုံ့ငုံ့လျှောက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျားခြေရာလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကိုလုံးဝမတွေ့ရပါ။
ကျားသစ်အကြီးစားတစ်ကောင်ဟာ တစ်နေရာမှာဖြတ်သွားခဲ့တာကိုတွေ့ရပြီး နောက်တစ်နေရာမှာကျားသစ်မှတစ်ကောင်ဟာ သူ့သားပေါက်လေးတွေနဲ့ဖြတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာဒီလမ်းမှာကျနော်တို့ရှာနေတဲ့ကျားကဒီလမ်းကိုဖြတ်မသွားဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့သစ်တောဘိုတဲကိုပြန်ရောက်ပြီးအေးစက်စက်နေ့လည်စာကို နောက်ကျပြီးစားရချိန်မှာ ညနေ ၃ နာရီထိုးကာနီးပါပြီ။
ညနေ ၅ နာရီမှာကျနော်ဟာတပည့်ရှိုလေဂတွေကို သူတို့ညအိပ်နေကျဘိုင်လူးကိုပြန်ပို့ပါတယ်။ သူတို့တွေကို မိုင်တိုင် ၂၁ ကနွားကိုမနက်စောစောသွားကြည့်ဖို့မှာခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တစ်ယောက်တည်းဘိုတဲကိုပြန်လာတော့ည ၇ နာရီကျော်ပါပြီ။ အဲ့ဒီညကကျနော်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာဒုတိယနွားဟာဘိုတဲနဲ့ ဘိုင်လူးအကြားအလယ်လောက်မှာရှိတယ်ဆိုပေမယ့် လူသွားလမ်းကနေအတန်ငယ်ဖဲ့ထွက်ပြီးမှရောက်တာပါ။
ဒုတိယနွားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျနော်ဟာ ဘိုတဲနဲ့ဘိုင်လူးလမ်းဆီကို ပြန်လျှောက်ကာဘိုတဲဆီကွေ့ပြန်ပြီးမနက်စာကိုရှိတာနဲ့ဖြစ်သလိုစားလိုက်ပြီးကျနော့်တပည့်တွေကို ၉နာရီ ၁၅ လောက်ကတည်းက ဘိုင်လူးကနေအသင့်စောင့်နေပါတယ်။
ကျနော့်တပည့်သုံးယောက်မနက် ၁၀ နာရီမထိုးခင်ပြန်ရောက်လာပြီး ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုင်တိုင် ၂၁ နားမှာချည်ထားတဲ့ တတိယနွားကို ကျားဆွဲသွားတာတွေ့ရကြောင်းပြန်ပြေပါတယ်။
ကံကောင်းတာက ကျနော်ဟာ အဲ့လိုအရေးပေါ်ကိစ္စမျိုးအတွက်ကျနော့်ရဲ့ဓာတ်မီးနဲ့ညဘက်ကျားပစ်ရန်လိုအပ်တာတွေကိုကျောပိုးအိတ်ထဲမှာအသင့်ပြင်ဆင်ပြီး ကြိုထည့်လာခဲ့ပါ။
ကျနော်တို့ဟာ အဲ့နေရာကိုအမြန်ဆုံးပြန်သွားကာ နေ့လည် ၁၂ နာရီမထိုးခင်နွားချည်ထားခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်ပါတယ်။
ကျားရဲ့နွားဆီကိုချဉ်းကပ်လာတဲ့ခြေရာတွေကို နွားနဲ့ပေ ၂၀ အကွာမြေပျော့မှာကတည်းကတွေ့ရပါတယ်။ ခြေရာတွေအရနွားကိုကိုက်သတ်ဆွဲယူသွားတာကျားမပါ။ ကျားထီးမဟုတ်ပါ။
ကျားမဟာအဲ့ဒီမြေပျော့ကနေနွားကိုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်ခုန်အုပ်ကာ နွားခြေထောက်မှာချည်ထားတဲ့နွားလံကြိုးကိုဖြတ်ပြီး နွားကိုကိုက်သတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျားမဟာနွားကိုဘယ်လောက်ဝေးဝေးသယ်ယူသွားမှန်းမသိတာကြောင့် ကျနော်ကကျနော့်တပည့်သုံးယောက်ကို မိုင်တိုင် ၂၁ ကနေစောင့်ဖို့မှာခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်ကနွားကိုကျားမဆွဲသွားတဲ့စွပ်ကြောင်းအတိုင်းလိုက်မှာဖြစ်ပြီးအကယ်လို့နွားသေဟာ ခပ်ဝေးဝေးကိုသယ်ယူသွားခံရရင် ကျနော်ဟာနွားသေနားကစောင့်ပြီးကျားပစ်ဖို့ ပုန်းစရာနေရာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးသာဖြစ်ခဲ့ရင်ဘိုတဲကိုမပြန်ရပဲ အဲ့နေရာမှာတညလုံးစောင့်ရနိုင်ပါတယ်။
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့ ညနေ ၃ နာရီထိုးတဲ့အထိမှကျနော်မိုင်တိုင် ၂၁ ကိုပြန်မရောက်ရင်သူတို့ဘာသာသူတို့ဘိုင်လူးကိုပြန်စောင့်ဖို့အသင့်မှာထားပြီးသားပါ။
မကယ်လို့ကျားမကဝေးဝေးမဆွဲသွားခဲ့ရင် ကျနော်ကတပည့်တွေကိုပြန်ခေါ်ပြီး တညလုံးကျနော်ကျားပစ်စောင့်မယ့် သင့်တင့်တဲ့လင့်စင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုကို ထိုးခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျားမဟာနွားသေကောင်ကိုကိုက် ၂၀၀ လောက်ပထမဦးဆုံးဆွဲသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်အထိတော့ကျားမဟာ စမ်းချောင်းလေးနားတစ်လျှောက်မြေနိမ့်ပိုင်းမှာပေါက်နေတဲ့ ဝါးရုံတောကို အတားအဆီးမရှိဖြတ်ဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာကျားမဟာနွားသေကိုသူ့ကျောပေါ်ခေါင်းတစ်စောင်းနဲ့လွှဲတင်ကာ ကျားတွေတစ်ခါတလေလုပ်လေ့ရှိတဲ့အတိုင်း နွားသေကိုကျောပိုးကာ ချုံတောကိုဖြတ်တိုးသွားပါတယ်။
နွားခွာသို့မဟုတ်နွားချိုနဲ့ ချိတ်မိလို့ဟိုနားဒီနားလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကျိုးနေတဲ့စိန်နားပန်ကိုင်းတွေသာလျှင် ကျားမသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြနေပါတယ်။
စိန်နားပန်ချုံအောက်ကသစ်ရွက်အကြွေတွေရယ်၊ သစ်ရွက်ခြောက်အဆွေးတွေရယ်ပေါ်မှာ ကျားမခြေရာကိုရှာတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိပါ။
ဒါကြောင့်ကျနော်ဟာခြေတစ်လှမ်းခြင်းအလွန်နှေးစွာနဲ့ချုံတိုးတဲ့အလုပ်ကို မဖြစ်မနေလုပ်ရပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကျနော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။
ကျားမသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုစေ့စေ့စပ်စပ်အာရုံအပြည့်နီးပါးထားကာရှာဖွေနေရချိန်မှာ ကျနော့်ကိုကျနော်ကျားမရဲ့ရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်ခြင်ူမခံရအောက်လည်းသတိကြီးစွာထားပြီး မျက်စိဖွင့်နားစွင့်ကာရှိသမျှအာရုံကြောတွေအကုန်ခံကာသတိကြီးစွာနဲ့သွားရတာမျိုးပါ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ စိန်နားပန်ချုံတောထဲကနေ စွံပလွန်ပင်ပုလေးတွေနဲ့သစ်ပင်အချို့အစီအရီပေါက်နေတဲ့ အောက်ခြေပိုရှင်းတဲ့တောအုပ်လေးထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
လမ်းတစ်လျှောက်ကျားမဟာနွားသေကိုကျောပေါ်ကချပြီးနားခဲ့တဲ့နေရာနှစ်နေရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ နွားကိုကျောပိုးပြီးကြာရှည်ချီယူလာစဉ်မှာ ဇက်ညောင်းကာနားပုံရပ်တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ သစ်ပင်တွေကြားကနေ မိုင်တစ်စိတ်ကျော်ကျော်လောက်မှာ ကျနော်ရောက်နေတဲ့နေရာထက် ပေ ၂၀၀ လောက်မြင့်မယ့်တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ လမ်းကြောင်းကတောင်ကုန်းလေးဆီကိုတိုက်ရိုက်သွားနေတာပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျားထီးကျားမကွဲခြင်းက လူသားစားကျားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားခိုင်ခိုင်မာမာမဟုတ်စေသော်လည်း ရထားတဲ့ဒေတာအချက်အလက်အားလုံးအရလူသားစားကျားဟာကျားထီးတယ်လို့ဆိုနေလို့ပါပဲ။
လူသားစားကျားဟာ ဗယ်ဘက်မျက်စိလပ်နေပြီးဗယ်နားရွက်ပါပြတိနေတယ်ဆိုတဲ့သိထားတဲ့အချက်အရ အခုကျားမကိုပိုသေချာအောင်တစ်ချက်လောက်ကျနော်မြင်တွေ့ခွင့်ရချင်ပါတယ်။ ဒါမှဒီကျားမဟာလူသားစားကျားဟုတ်မဟုတ်အခိုင်အမာပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျားမကိုဘယ်လိုတွေ့ခွင့်ရဖို့က ပြဿနာပါပဲ။ ဟေ့ … ကျားမ … ခဏလောက်ကြည့်ခွင့်မျက်နှာလေးကြည့်ခွင့်ရချင်တယ်လို့သွားအော်လို့မရပါ။ နောက်ယောင်ခံလိုက်မှု၊ကာယိန္ဒြေပျက်မှုနဲ့ကျားမကကျနော့်ကိုတစ်ချက်လောက်ပါးချလိုက်ရင်မစားသာပါ။
ဒါပေမယ့်ဒါကကျနော်မနှစ်သက်တဲ့အလုပ်ပါပဲ။ ကျားမကလူသားစားကျားမဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှ သူမရဲ့ကလေးတွေရှိနေတဲ့ သားရဲတွင်းဝကိုတံခါးလာခေါက်တဲ့လူသားကို အပြုံးနဲ့ကြိုမှာမဟုတ်သလောက်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့်ကျနော်ရှေ့တိုးခြေရာခံလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာခြေရာခံရတာပိုလွယ်သွားပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျားမကကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်တွေကြားမှာဖြတ်တိုက်ပြီးလျှောက်သွားစဉ်မှာ နွားသေရဲ့သွေးတွေကလမ်းကြောင်းပြကျန်ခဲ့လို့ပါပဲ။
ကျောက်တုံးကြီးတွေကကျိုက်ထီးရိုးတောင်မှာလို ဟိုတစ်ပုံဒီတစ်ပုံရှိနေပြီး ကျားမကအဲ့ဒီကျောက်တုံးကြီးတွေအကြားကျောပေါ်ကနွားသေမညပ်အောင် ကွေ့ပတ်သွားပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ညနေ ၃ နာရီထိုးဖို့ ၁၀ မိနစ်အလိုဖြစ်ပြီးနေကကျောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာရက်ရက်စက်စက်ပူနေပါတယ်။
မျက်လုံးထဲစီးဝင်တဲ့ချွေးတွေကြောင့်ကျိန်းစပ်စပ်ဖြစ်တဲ့အပြင် ကျနော့်ရဲ့ပါးစပ်ထောင့်စွန်းထဲကိုပါစီးဝင်လာကာ အခုလိုကျားနောက်လိုက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်မှာပဲ ပါးစပ်ထဲမှာငန်တန်တန်အရသာကိုခံစားမိပါတယ်။
ထောင့်ချိုးတွေမှာဘာရှိမှန်းမသိရပဲ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကျနော်ဟာ တစ်ကွေ့ပြီးတစ်ကွေ့သတိနဲ့ချိုးကွေ့လာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ကျနော်ဟာစင်တန်းထိုးထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ ခပ်စောင်းစောင်းကျောက်တုံးကြီးတစ်ခုနေရာကိုရောက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီကျောက်စောင်းကြီးဟာ မြေပြင်ကနေ၃၀ ဒီဂရီလောက်ခပ်စောင်းစောင်းဖြစ်နေကာ အောက်ဖက်မှာ ဂူမဟုတ်ပဲခိုလှုံစရာနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
ကျနော်ဟာရပ်လိုက်ပြီး မသိမသာရိုင်ဖယ်သေနတ်မောင်ထိုးလိုက်ချိန်မှာ ကလစ်ချိုတဲ့အသံလေးတိုးတိုးလေးမြည်သွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးနှစ်ကောင်ဟာ ကျားပေါက်စလေးတွေပဲဖြစ်ပေမယ့် မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့သွေးထဲကပါလာတဲ့ အန္တရာယ်ကိုသိတဲ့အသိကရှိပြီးသားပါ။
သူတို့ဟာဆော့တာရပ်လိုက်ကာ နှစ်ကောင်လုံးထွေးနေတာကရုန်းထွက်လိုက်ပြီး ကျနော်ရှိတဲ့ဘက်ကို အထိတ်တလန့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
အခုအရွယ်မှာတောင်တစ်မိတည်းဖွားနှစ်ကောင်က မတူတာကိုကျနော်သတိထားမိပါတယ်။ တစ်ကောင်ကအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အကြည့်နဲ့ အံ့အားသင့်ကာမျက်လုံးပြူးပြူးလေးနဲ့ကြည့်နေပြီး နောက်တစ်ကောင်ကမျက်မှောင်ကြုတ်ကာ ရှုးကနဲတစ်ချက်အစွယ်ပြကာမန်ဖီလိုက်ပါတယ်။
ကျားမဟာကျောက်တောင်တွေတုန်သွားလောက်အောင်ဆက်တိုက်ဟိန်းဟောက်လိုက်ကာ မြေလှိုင်တွင်းကနေ သူ့ကလေးတွေဆီ ဝုန်းကနဲထွက်လာက ကျားပေါက်လေးတွေကိုခုန်ကျော်ပြီး ကျနော့်ဆီတန်းလာပါတယ်။
ကျားမနဲ့ကျနော့်ကြားကအကွာအဝေးဟာ ကိုက် ၂၀ လောက်ရှိပါတယ်။ ကျားမရှေ့တိုးလာချိန်မှာ ကျနော်ဟာကျားမရဲ့မျက်လုံးနှစ်လုံးကြားကို သေနတ်နဲ့အသေအချာလိုက်ချိန်ထားပါတယ်။
ကျနော်နဲ့ ၅ ကိုက်လောက်အကွာမှာကျားမရပ်လိုက်ပါတယ်။ အခုကျားမကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရပါပြီ။ သေချာပါပြီ သူမဟာကျနော်ရှာနေတဲ့လူသားစားကျားမဟုတ်တာသေချာပါပြီ။
ကျားမကြီးဟာနွားကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာတစ်ကိုက်မှကိုက်မစားပဲ နွားလံကြိုးကိုကိုက်ဖြတ်ကာ ဒီအထိဝါးရုံတော၊ စိန်နားပန်ချုံတွေ၊ ကျောက်ဆောင်ကျောက်တုံးတွေကြားကို ခက်ခက်ခဲခဲတပင်တပန်းဖြတ်ပြီးအလေးခံသယ်ယူသွားတာဟာ ကြီးမားတဲ့မိခင်တစ်ခုတည်းမေတ္တာကြောင့်ပဲ။
အခုလိုမိခင်မေတ္တာနဲ့သားစိတ်မွှန်နေတဲ့ကျားမဟာ လူသားစားမဟုတ်ပေမယ့်ကျနော့်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ကလည်းမလွတ်တမ်းသေနတ်နဲ့ချိန်ထားပါတယ်။သို့သော်လူသားစားကျားမဟုတ်တဲ့ကလေးတွေနဲ့သားသည်အမေကျားမတစ်ကောင်ကိုကျနော်ပစ်မသတ်ရက်ပါ။
ကျားမဟာအဲ့ဒီ ၅ ကိုက်အကွာမှာဝမ်းဗိုက်နဲ့မြေကြီးကိုကပ်ဝပ်ကာ မီးဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ အစွယ်ဖွေးဖွေးပါးစပ်ကြီးကိုဖြဲကာ ဟိန်းချလိုက်တာမှာကျနော်ရပ်နေတဲ့မြေကြီးပါတုန်ဟီးသွားတဲ့အထိပါပဲ။
အင်မိအင်မတန်ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲ ကျားမဟာသူမရဲ့နယ်အတွင်းမှာ ကျနော့်ကိုမတိုက်ခိုက်ပါဘူး။ ကျားတွေထုံးစံအတိုင်းရဲရဲဝံ့ဝံ့တည့်တည့်ရင်ဆိုင်နေသူကိုနောက်ဆုံးမှာ မတိုက်ခိုက်ရဲတော့တဲ့သဘောပါပဲ။
ဒါပေမယ့်သူမဟာကျနော်ကိုအရိုးရှင်းဆုံးဘာသာစကားနဲ့ “ခုချက်ချင်းထွက်သွားစမ်း၊ ငါ့ကလေးတွေထိရင်မီးပွင့်သွားမယ်” လို့ ဝမ်နင်ပေးနေပါပြီ။
ကျနော်ကျေနပ်စွာနဲ့သူမရဲ့အမိန့်ကိုလိုက်နာခဲ့ပါတယ်။ ခြေတလှမ်းခြင်းသတိကြီးစွာနဲ့ နောက်ကိုဆုတ်လာခဲ့ချိန်မှာ ကျနော့်မျက်လုံးတွေကကျားမဆီကမခွာသလိုလက်ညှိုးကလည်းကျားမမျက်လုံးနှစ်လုံးကြားကိုချိန်ထားတဲ့ ရိုင်ဖယ်ခလုတ်ပေါ်ကမဖယ်ရဲပါဘူး။
ကျားမဟာကျနော်ပြန်ဆုတ်ပေးတာကိုသိတဲ့ပုံနဲ့ ကျနော့်နောက်ကလိုက်မလာပဲ အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရပ်နေပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာကျနော်သိလိုက်တာက သူမဟာကျနော့်ကိုအန္တရာယ်ပြုချင်စိတ်မရှိပါ။ သူမရဲ့ကလေးတွေကိုသာ ကာကွယ်လိုတဲ့ပုံပါ။
သူမဟာကျနော့်ကိုလန့်ချင်လန့်နေပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်ကလည်းသူမကိုလန့်ပါတယ်။အနားနားကပ်ပြီး သားစိတ်နဲ့အသားကုန်ဟိန်းဟောက်လိုက်တဲ့ကျားနဲ့ အန္တရာယ်နဲ့လက်တစ်ကမ်းအကွာမှ ရင်ဆိုင်ဖူးသူတိုင်းဒီရင်တုန်ထိတ်လန့်ရတဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ ကျားမကိုအန္တရာယ်မပြုလိုသလို ပျော်ရွှင်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုအသိုက်အမြုံလေးတစ်ခုကိုလည်းမဖျက်ဆီးချင်ပါဘူး။
အဲ့လိုနဲ့ကျနော်ဟာနောက်ဆက်ဆုတ်လာပါတယ်။ကျားမကတော့ဆက်လက်ဟိန်းဟောက်ဆဲပါပဲ။ကျားမရဲ့မျက်ကွယ်ကျောက်တုံးလမ်းချိုးကလေးရောက်မှ ကျနော်ဟာကျနော်သွားမယ့်လမ်းရှိရာ နောက်ဖက်ကိုအလျှင်အမြန်နောက်ပြန်လှည့်ရဲပါတော့တယ်။
ကျားမကတော့ကျနော့်ကိုမမြင်ချိန်မှာ ဟိန်းဟောက်တာရပ်သွားပြီး မာန်ဖီသံမြည်ပြီးကျန်ခဲ့ပါတယ်။
သူမအခုလိုမာန်ဖီသံပေးနေသ၍ ကျနော်အန္တရယ်ကင်းနေတယ်ဆိုတာ ကျနော်သိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူမဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကို ဒီအသံကနေကျနော်သိနေလို့ပါပဲ။
နောက်ကျောက်ဆောင်တစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်အပြီးမှာ ကျနော်ဟာကျားမစိတ်မပြောင်းခင် နောက်လှည့်ပြီးခြေကုန်သုတ်ကာလစ်ပါတော့တယ်။
သူမဟာကလေးတွေဆီပြန်သွားနိုင်သလို ကျနော့်လောက်ကိုစိတ်မချပဲလည်းလိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ဟာနောက်ကိုမကြာခဏလှည့်လှည့်ကြည့်ကာ တောင်ကုန်းလေးအောက်ဘက်ကို လျှင်မြန်စွာဆင်းချလာခဲ့ပါတယ်။
မကြာခင်မှာကျနော်ဟာ စောနကဖြတ်လာခဲ့တဲ့ စွံပလွန်ပင်ပုအုပ်အုပ်ရယ် စိန်နားပန်ချုံရယ်ကိုဖြတ်ကာ ဝါးရုံတောကိုဖြတ်တိုးပြီး လမ်းမပေါ်ရောက်လာပါတယ်။
အခု ၄ နာရီခွဲရှိပြီဖြစ်ပြီး ကျနော့်တပည့်ကျော်တွေဟာ ကျနော်မှာထားတဲ့အတိုင်းဘိုင်လူးကိုပြန်သွားနှင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ဘိုင်လူးကိုပြန်ရောက်ဖို့ ၉ မိုင်လောက်လျှောက်ဖို့ကျန်နေပြီး အမှောင်မကျခင် ၂ နာရီလောက်ပဲအချိန်ရပါတော့တယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်ဟာ လမ်းဘေးမှာ ၅ မိနစ်လောက်ထိုင်ပြီး ဆေးတံဖွာလိုက်ပါသေးတယ်။ ကျနော်ဒီလောက်တော့ထိုက်တန်ပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ ခေါင်းထဲမှာကျားပေါက်လေးနှစ်ကောင်ပုံပြန်ပေါ်လာချိန်မှာ ကျားမကိုအတင်းအကျပ်ပစ်ရတဲ့ဘဝမရောက်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ဘိုင်လူးရွာကိုပြန်ရောက်တော့ ည ၆ နာရီခွဲပါပြီ။ ကျနော့်အဖော်သုံးယောက်ဟာ ကျနော့်အတွေ့အကြုံကိုနားထောင်ဖို့မျှော်လင့်တကြီးစောင့်နေကြပါတယ်။
ကျားကိုပစ်ခဲ့ရလား? ဘယ်လောက်ကြီးလဲ? မျက်စိတစ်ဖက်လပ်နားရွက်ပြတ်ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးလား? စသိဖြင့်သူတို့သိချင်ပါလိမ့်မယ်။
ဘိုင်လူးရွာလေးမှာတပည့်တွေကိုထားခဲ့ပြီး သစ်တောဘိုတဲဆီကျနော်တစ်ယောက်တည်းပြန်ချိန်မှာ ညကအတော်မှောင်နေပါပြီ။
ဘိုင်လူးနဲ့ဘိုတဲအကြားမှာ လမ်းကနေဖယ်ထွက်ပြီးသစ်တောထဲလျှောက်သွားရင်လမ်းကနေသိပ်မဝေးတဲ့နေရာ တောထဲကမြေကွက်လပ်မှာ ကျနော်ပြောဖူးတဲ့ဒုတိယနွားကိုချည်ထားတဲ့နေရာရှိပါတယ်။
မနက်ကဘိုက်လူးကိုလာရင်း ဒီနွားကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါရဲ့သားနဲ့ အခုလိုပင်ပင်ပန်းပန်းနောက်ကျပြီးဘိုတဲကိုပြန်ချိန်မှာ ဘာလို့ဒီနွားကိုအချိန်အကုန်ခံခရီးဖင့်အောင် ဝင်ကြည့်ချင်တဲ့သိတ်ကူးကျနော့်မှာပေါ်လာလဲဆိုတာ ကျနော်မပြောပြတတ်ပါ။
ဒါဟာတဒင်္ဂစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဆန္ဒတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်ဘဝမှာအခုလိုရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ တွန်းအားနောက်တုန့်ပြန်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။
လေကလည်းတောလမ်းလေးဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာပေါက်နေတဲ့ ကုက္ကိုပင်ကိုင်းတွေကို ရုတ်တရက်ဖြတ်တိုက်လိုက်ပါတယ်။
ကျနော်ဟာနွားချည်ထားတဲ့ တောသဖန်းပင်လေးဆီကိုရောက်လာပါတယ်။သဖန်းပင်လေးအောက်မှာအပင်ရိပ်နဲ့ပိုပြီးမှောင်မည်းနေပါတယ်။ နွားကလည်းအညိုရောင်မို့လို့ ကျနော်အလွန်အနီးကပ်မရောက်ခင်အထိ နွားကိုမမြင်ရပါဘူး။
နွားဟာကျနော်ချဉ်းကပ်လာချိန်မှာ ခြေထောက်ပေါ်ထရပ်လိုက်ပါတယ်။ ပုံစံကကျနော့်ကိုတွေ့လို့လန့်သွားပုံပါပဲ။
ကျနော်ဟာ နွားနောက်ခြေထောက်မှာချည်ထားတဲ့ နွားလံကြိုးလိမ်နေမနေစစ်ဆေးဖို့နွားရဲ့တစ်ဖက်ကိုသွားလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်ကနွားတစ်ဖက်ကိုကြိုးကိုစစ်ဖို့သွားလိုက်တာဟာ အလွန်ကံကောင်းသွားတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်နဲ့ကျားအကြားမှာ နွားကခံလျက်သားဖြစ်သွားတာပါ။ ဒါပေမယ့်အခုလိုကျားရုတ်တရက်ဝုန်းကနဲထတိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာ လုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းကျနော်ဝန်ခံပါတယ်။
ကျနော်အခုလေးမှထွက်လာတဲ့သစ်တောထဲကနေ ဝေါင်းကနဲအလွန်ကျယ်လောင်စွာဟိန်းလိုက်သံကို ရင်တုန်သွားအောင်ကြားလိုက်ရပါတယ်။
နွားကရုတ်တရက်လှည့်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ကသူ့နောက်ကိုခုန်ဝင်ပြီး သဖန်းပငက်ပင်စည်နဲ့ကျနော့်ကျောကိုကပ်ထားလိုက်ရာမှာ နွားလံကြိုးကိုခလုတ်တိုက်ပြီးချော်လဲမတတ်ဖြစ်သွားပါတယ်။
အမှောင်ထဲမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ မီးခိုးရောင်အရာကြီးဟာနွားကျောကုန်းပေါ်ခုန်တက်လိုက်ရာမှာ နွားကရုတ်တရက်အလေးချိန်ကိုမခံနိုင်ပဲ ပုံပျက်ပန်းပျက်ချော်လဲသွားပါတယ်။
ကံကောင်းစွာနဲ့နွားချော်လဲသွားရာမှာ ကျားရဲ့ကျနော့်ကိုခုန်အုပ်ဖို့ ဟန်ချက်ကိုပျက်သွားစေပါတယ်။ နို့မဟုတ်ရင် တစ်စက္ကန့်ရဲ့အချိန်ပိုင်းကလေးအတွင်းမှာပဲကျားကကျနော့်ကိုခုန်အုပ်အပြီးဖြစ်သွားမှာပါ။
နွားပေါ်မှာနွားနဲ့အတူလဲကျရင်း ကျားဟာကျည်ဆန်ထိမှန်ချိန်မှာ ကြွက်သားတုန့်ပြန်မှုနဲ့ တစ်ချက်နောက်ကိုတွန့်သွားပါတယ်။
စဉ်းစားစရာလိုပဲအော်တိုမက်တစ်ကျနော်ဟာကျားရဲ့ နှလုံးရှိရာဗယ်ဘက်လက်ပြင်နောက်ကို ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ထပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
နွားဟာမထနိုင်ပဲပြန်လဲကျသွားပါတယ်။ ကျားဟာနွားပေါ်ကနေကျနော့်ဆီကိုလိမ့်ထွက်လိုက်ချိန်မှာ တတိယကျည်ဆန်ကသူ့လည်ချောင်းထဲဖောက်ဝင်သွားပါတယ်။
ရိုင်ဖယ်ထိပ်မှာချည်ထားတဲ့ကျနော့်ဓာတ်မီးရောင်အောက်မှာ ကျနော်ပစ်လိုက်တဲ့ပထမကျည်ဆံဟာ ကျားရဲ့ဦးခေါင်းခွံကိုခြေမွှလိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒုတိယကျည်ဆန်ကအတော်အောက်ရောက်လွန်းသွားပြီး ပွိုင့် ၄၀၅ ရိုင်ဖယ်ကျည်ဆန်ဟာ ကျားရင်ပတ်ထဲဝင်ကာနွားဘက်အခြမ်းမှာ အတော်ကြီးတဲ့အပေါက်ကြီးအဖြစ်မွှေထွက်သွားပါတယ်။
ကျနော့်ရဲ့လက်တွေဟာတုန်နေပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ဒူးခေါင်းတွေကလည်း တဆတ်ဆတ်တုန်ကာခြေမခိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ရုတ်တရက်ကြီးကျနော်ဟာအလွန်နေလို့မကောင်းတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရပါတယ်။
ကျနော်ဟာသဖန်းပင်ပင်စည်ကိုမှီပြီးမြေကြီးပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ ကျနော့်လက်ကိုကျနော့်နဖူးပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ ရေခဲလိုအေးနေတာကိုထိတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ကျနော်ဘယ်လောက်ကြာကြာအဲ့လိုထိုင်နေမိသလဲဆိုတာကျနော်မသိပါ။ နောက်တော့ကျနော့်ဆေးတံကိုရှာဖွေစမ်းသပ်ပြီး ဆေးဖြည့်ကာမီးညှိလိုက်ပါတယ်။
ပထမလေးငါးချိန်ဖွာလိုက်ချိန်မှာ ကျနော့်ရဲ့အလွန်တုန်လှုပ်နေတဲ့ အာရုံတွေကိုငြိမ်အောင်ထိန်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။
ရွာထဲကလူတွေဟာရွာလမ်းပေါ်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားကာ မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ ရိုးတိုးရွတစုရုံးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
တောထဲအနီးတဝိုက်ကသစ်ပင်တွေဟာကျနော့်ရဲ့ကျယ်လောင်တဲ့သေနတ်သံကိုတောင်ကြားတကျောရှိ ကျောက်တောင်တွေမှတဆင့်ပဲ့တင်အသံပြန်ကာ ရွာသားတွေကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကကျနော်ဘိုတဲကိုအပြန်လမ်းမှာ တောကောင်တစ်ကောင်ကောင်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီလို့ မှန်းဆထားကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူသားစားကျားပဲလား? ညဘက်အစာထွက်ရှာတဲ့ဆင်ပဲလား? ဝက်ဝံလားတွေးနေကြတာပါ။
အမှောင်ထဲကနေကျနော်ပေါ်ထွက်လာချိန်မှာ သူတို့ဟာကျနော့်ဆီအမြန်ပြေးလာပြီးကြိုဆိုကြပါတယ်။ ကျနော့်တပည့်သုံးယောက်ကတော့ဘာပြောကောင်းမလဲ လူအုပ်ရဲ့ရှေ့ဆုံးကပေါ့ဗျာ။
တအံ့တဩ ဟင်ကနဲဟာကနဲသူတို့ရဲ့ပါးစပ်ကရေရွတ်သံပေါ်လာအပြီးမှာ ဖိုးကံကောင်းကျနော့်ကို သေမင်းနဲ့လက်တစ်ကမ်းအကွာကလွတ်လာလို့ဝိုင်ူပြီးကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းလုပ်ကြပါတယ်။
အမလေးလေး သခင်ကြီးကံကောင်းလို့ပေါ့ဗျာ။ နို့မို့ရင်အခုလောက်ဆိုကျားစာဖြစ်ပြီ။ ကျနော်တို့လည်းကယ်မယ့်သူနဲ့ဝေးပြီလို့ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
Chattie မြေအိုးလေးနဲ့ထည့်ထားတဲ့နွားနို့ပူပူရယ်၊ ငှက်ပျောသီးတစ်ဖီးရယ်စာကျနော့်ရှေ့ကိုရောက်လာပါတယ်။ မများပေမယ့် ရွာသားတွေရဲ့ရင်ထဲအသည်းထဲကလာတဲ့ပကတိကျေးဇူးတင်မှုကိုသယ်ဆောင်လာတဲ့ လက်ဆောင်တွေပါပဲ။
နောက်နာရီဝက်လောက်အတွင်းမှာ တရွာလုံးဟာ လက်ဆွဲမီးအိမ်တွေ၊ မီးတုတ်တွေ၊ဝါးလုံးတွေ၊ ကြိုးခွေတွေနဲ့ ကျားသေကိုသွားသယ်ဖို့စုရုံးပြီးနေပါပြီ။
အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်ရောက်တော့ လူ ၅၀ ကျော်ဟာထူးထူးဆန်းဆန်းမြင်ကွင်းကိုမျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ အံ့ဩတကြီးဝိုင်းကြည့်ကြပါတယ်။
သူ့ဓားတိုနဲ့ကျားသေကိုစထိုးပါတော့တယ်။ ကျနော် ၃ ချက်ပစ်ထားလို့ပုံပျက်နေပြီဖြစ်တဲ့ကျားအရေခွံပေါ်မှာ ဒဏ်ရာတွေဗလပွနဲ့ဖြစ်ပြီး တစ်စစီဖြစ်သွားမှာကိုကျနော်မလိုလားပါ။
ကျနော်ဟာသူ့ကိုဘာမှမပြောရက်ပါ။ သူ့ပခုံးကိုအသာလေး၊ ဒါပေမယ့်ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကာ သူ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဂျေကန်ဟာပထမဦးဆုံးဒီကျားကိုက်သတ်စားခဲ့တဲ့သူ့မိန်းမလေးကိုသတိရရင်း မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်ငိုချလိုက်ပါတော့တယ်။
နှလုံးသားထဲအထိနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းငိုကြွေးနေတဲ့ သတ္တိရှိရှိသန်သန်မာမာယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ငိုကြွေးနေမှုကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ခံစားဖို့ကမလွယ်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ဒီခံစားမှုဟာကူးစက်စေပါတယ်။ ကျနော့်လည်ချောင်းထဲမှာထူးဆန်းစွာနဲ့တစ်တစ်ဆို့ဆို့ကြီးဖြစ်လာတာကို ကျနော်ခံစားရပါတယ်။ အဲ့ဒီတစ်ဆို့နေတဲ့ခံစားမှုကြီးကို အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိကျနော်မျိုမချနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ရွာသားတွေဟာကျားသေကိုရွာပြန်သယ်ပြီး ရွာအလယ်မှာပြသထားပါတယ်။ အိန္ဒိယထုံးစံအတိုင်းလူသားစားကျားရုပ်ဆိုးကြီးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းဟာ တောင်ကြောတစ်လျှောက်ပြန့်သွားပြီးအနီးအနားရွာကလူတွေလာကြည့်ကြပါတယ်။
ဒီကျားကိစ္စများများစားစားထပ်ပြောစရာမကျန်ပါ။ မနက်ကျမှ ထူးဆန်းတာတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်။
နောက်တနေ့မနက်ရောက်တော့ ဂျေကန်ဟာကျနော်တည်းတဲ့ဘိုတဲဆီကိုလမ်းလျှောက်လာစဉ်မှာ ကျနော်တောလမ်းကဖဲ့ထွက်ပြီး နွားကိုသွားကြည့်ဖို့နေရာလေးကိုဖြတ်လျှောက်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ သူဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မနေ့ညကကျနော်ဘိုတဲအပြန်ကိုကျားကလမ်းဘေးချုံထဲကနေ အသင့်ဝပ်ပြီးစောင့်ခဲ့တဲ့နေရာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ကျနော်တို့ခြေတိုအောင်လိုက်ရှာနေခဲ့တဲ့ကျားဟာ တကယ်တော့ဒီအနီးတဝိုက်မှာပဲရှိနေပြီး ကျနော်ဘိုတဲဘက်လမ်းလျှောက်လာနေတာကို ကြားထားမြင်ထားခဲ့ပြီး ရှေ့ကနေကြိုတင်အဆင်သင့်ဝပ်စောင့်နေပုံပါပဲ။
ဂျေကန်ကသူတွေ့ခဲ့တာကိုကျနော့်ကိုပြန်ပြောပြချိန်မှာ ကျနော်သူနဲ့ဘိုင်လူးဘက်ပြန်လျှောက်သွားပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
သူပြောတာအမှန်ပဲဆိုတာကျနော်တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာသဲမြေပျေားပျော့ပေါ်မှာ ကျားဝပ်စောင့်ခဲ့တဲ့အရာရယ်၊ ကျားခြေရာတွေ့ရပါတယ်။
ကျားကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ညကနေအခုချိန်အထိ ၁၂ နာရီကျော်ကြာပြီးတာတောင်မှခံပန်းချုံအောက်ကမြက်ပင်ပေါင်းပင်တွေဟာ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပိပြားပြီးလဲနေသေးတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် ကျားဟာရုတ်တရက်အလစ်ချုံခိုပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကြိုတင်ဝပ်စောင့်ခဲ့တဲ့ပုံရပါတယ်။
ဒါတောင်မှ လူအချို့က လောကကြီးမှာ ဘုရားကယ်ခြင်း၊ ကိုယ်စောင့်နတ်ရှိခြင်း၊တစ်ခုခုဆိုအလိုလိုသိခြင်း၊ ဆဌမအာရုံရှိခြင်းစတဲ့သင့်ဘာသာသင်ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ် ဒါတွေတကယ်မရှိပါဘူးလို့ပြောချင်ကြပါသေးတယ်။
ကျနော်ဟာဘာဖြစ်လို့ အရမ်းပင်ပန်းနေချိန်မှာ မနက်ကမှကြည့်ထားတဲ့နွားကို ခရီးအဖင့်ခံပြီးသွားကြည့်ချင်စိတ်ရုတ်တရက်ပေါ်လာတာလဲ❓
ဂျေကန်ဟာအဲ့နေရာရောက်မှ ဘာလို့တောထိုင်ချင်စိတ်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီး ကျားပုန်းစောင့်ခဲ့တဲ့ခံပန်းချုံတောထဲတည့်တည့်ကြီးဝင်သွားမိတာလဲ❓
ကျနော့်အနေနဲ့အဲ့ဒီမယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုနားလည်ဖို့ထက် အစောင့်အရှောက်ရှိခြင်းဆိုတာကို ပိုပြီးနားလည်သဘောပေါက်မိပါတော့တယ်ခင်ဗျား။
(ဒါမျိုးတကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်မှတ်တမ်းတွေရေးစရာအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ထပ်ရေးရင်အနည်းဆုံး အပုဒ် ၃၀ လောက်ကျန်ပါသေးတယ်။
ကျနော့်ဆီမှာ မြန်မာပြည်တောထဲမှာအမဲလိုက်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁၀၀ကျော်လေးက တောကောင်မျိုးစုံဖောချင်းသောချင်းဖြစ်ကြောင်းမှတ်တမ်းတွေပါရှိပါတယ်။
ကျနော်ဟာဘာသာပြန်သူ translator မဟုတ်ပဲ စာဖတ်သူကိုကိုယ်နားလည်သလို ဖတ်ဖူးတဲ့ဗဟုသုတပါထည့်ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်ပုံပြင်ပြန်ပြောတတ်တဲ့ True story teller သာဖြစ်တာကြောင့် မူရင်းရေးသားသူရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ပိုင်ရေးနေကျပုံစံနဲ့ပြန်ရေးပေးထားတာမို့ ကျနော့်ခွင့်ပြုချက်မရပဲ စာအုပ်၊ဂျာနယ်တွေမှာဖော်ပြခြင်းမပြုဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။)
December 3, 2021 December 4, 2021 Richard Myo Thant
September 3, 2021 September 3, 2021 Richard Myo Thant
December 4, 2021 December 4, 2021 Richard Myo Thant